Imithi "Aqua Maris" athandwa kakhulu hhayi kuphela e-Russia kodwa futhi phesheya. Lokhu kwakungenxa ngenxa kahle eliphezulu lezi zimali kanye nenani ubuncane Izimo. Limelela iqembu kwemithi izifutho nosawoti kanye amathonsi Kunconywa ukugeza amazinyo anezimbobo acinene. Kanjalo ingasetshenziswa for the nokuvinjelwa kanye nokwelashwa rhinitis (kuhlanganise iguliswa) nezinye izifo ingaphakathi acinene.
Sebenzisa "Aqua Maris" -sprey Umhlahlandlela weluleka izingane ngonyaka amadala kweyodwa (ngaphambili, ungabheka amathonsi) kanye nabantu abadala. Uqukethe amanzi olwandle ukuhlanzwa ngaphandle anezele. Nokho, ngandlela-thile, isibonelo, ibe esebenzisa "Aqua Maris plus" ngaphezu kwalokho yakhiwa panthenol. Lo muthi ngokuvamile Kunconywa abantu ukoma okwandisiwe mucosa noma rhinitis, ephelezelwa ukwakheka lelitfutfukile soma.
abelaphi abaningi, allergists futhi ENT odokotela belulekwa ukuba ukuthenga izidakamizwa "Aqua Maris" (spray) labo abanemizimba imikhuhlane njalo. Landzelela izakhi ezikuyo, ibambe iqhaza ekwenzeni ngcono imisebenzi epithelium ciliated, kanye nokwesekwa physiologically evamile acinene mucosa.
Sebenzisa imithi "Aqua Maris" (spray) isitatimende uncoma kwale mibandela elandelayo: izifo oyingozi futhi ezingalapheki, izifo we ingaphakathi acinene, rhinitis iguliswa. Ayikho amacala ukweqisa izidakamizwa kanye nokuxhumana kwemithi nezinye izidakamizwa kungekho ulwazi.
Phakathi imiphumela emibi ukuze umuthi bangase baxabane nomzimba. Ngaphezu kwalokho, uma esetshenziswa ngendlela engafanele, i-izidakamizwa zingaqhubekela kwakhiwa evstahiit. Ukuze ugweme lokhu, kubalulekile ukuba athobele izincomo ezinikezwe imiyalelo. Ukuba izinsana zisebenzisa amathonsi, futhi izingane ezindala, uma ufuna ukugeza ezijulile, esikhundleni isifutho uyakwazi okungcono ukusebenzisa "ikhaya Aqua Maris", okuyinto has a idivayisi ekhethekile aqede Ukungena yesixazululo ku umsele Eustachian. Edayiswa Pharmacy ngaphandle kadokotela, kodwa sibonga ubuchwepheshe, eyingqayizivele ngezinhlobo zayo, kungashiwo agcinwe ekamelweni lokushisa isikhathi eside, futhi ukusebenza akuyona phansi.
Umuthi "Aqua Maris" ngesikhathi sokukhulelwa akuyona ingozi ngokuphelele, ngakho-ke ingasetshenziswa ngaphandle kokwesaba ukwelapha umkhuhlane futhi SARS (lihambisana namanye izidakamizwa agunyazwe) kule nkathi. Ngokuvamile, lokhu cishe akukho esebenzisa contra-izinkomba, kwasinda ukuma ngesimo isifutho izingane ezingaphansi konyaka kusukela ukusetshenziswa kwalo kungaholela ukulimala ngenxa yezinkinga lwamafinyila noma ezinye.
Ngokuba nokuvimbela "Aqua Maris" -sprey Umhlahlandlela uncoma izingane ngonyaka iminyaka engu 7 2-3 izikhathi ngosuku, ngaleyo ndlela kubalulekile ukwenza umjovo owodwa ku ikhala ngalinye. Okwangempela kuba epidemiologically inkathi eyingozi, kanye nokudla bome out kakhulu emoyeni egumbini lapho ngokuvamile ingane (nokusebenzisa umoya isimo, izinhlelo yokuhlukanisa, maphakathi Ukushisa). Izingane eziye zaphetha yobudala eyisikhombisa, bavunyelwe 2 umjovo njengoba kudingeka, kodwa akukho izikhathi ezingaphezu kuka-4 ngosuku, kanye nabantu abadala - izikhathi 6.
Ukuthambisa bese kokukhipha uketshezi anqwabelene isikhwehlela ukulungiselela "Aqua Maris" (spray) mathupha weluleka ukusebenzisa nje kunesidingo. liquid okweqile isuswe usebenzisa ngokucophelela swab ukotini. Kulesi inqubo ingase liphindwe izikhathi eziningana kuze kube target (ukususwa noma ukuthambisa of soma ne isikhwehlela) kufinyelelwe.
Futha ngoba impatho elibekelwe izingane kusukela ngonyaka owodwa iminyaka eyisikhombisa kweyesi-2 imithamo e ikhala ngamunye izikhathi 4 ngosuku, ngemuva kweminyaka eyisikhombisa - izikhathi 6, abadala angasebenzisa abezindaba kasi- 8 (kungaba injected izikhathi 2-3). Inkambo ingahlala amasonto 2-3, liphindwe njalo ngenyanga, uma kunesidingo.
Ngoba impatho rhinitis kungenzeka ngesikhathi esisodwa ukusebenzisa ezinye izidakamizwa, umsebenzi wabo spray "Aqua Maris" ayiphazamiseki.
"Polimedel": amazwana isicelo. ezenziwe
Izinhlobo umcabango, izici zawo nemisebenzi yezenhlalakahle
Isitayela Italian namaphakathi nezwe. imphawu letibalulekile
Inzuzo amabhizinisi: ukusatshalaliswa kanye nokusebenzisa inzuzo. Ukwakhiwa kanye akhawunti inzuzo